उत्तर कोरियामा खाद्यान्न संकट ! अब के गर्ला उत्तर कोरिया ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»विश्व»उत्तर कोरियामा खाद्यान्न संकट ! अब के गर्ला उत्तर कोरिया ?
उत्तर कोरियामा खाद्यान्न संकट ! अब के गर्ला उत्तर कोरिया ?
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०५:५२ विश्व
एजेन्सी : आफ्नो महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरियाले विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धको सामना गर्नु परेको छ ।
गत वर्ष मात्रै संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदसमेत कैयौं देशहरुले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमकै कारण उसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाए ।
त्यसो त उत्तर कोरियाको खाद्यान्न संकट पछिल्लो समय साधरण कुरा भएको बताइन्छ । यही कारणले गर्दा यहाँका नागरिकले सामान्य सामग्रीकै जोहोमा विभिन्न परिकारहरु बनाउने गरेको बताइन्छ ।